Does Metformin Causes Renal Injury - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆီးခြိုသမားတှရေဲ့လကျစှဲ metformin ဟာကြောကျကပျကိုထိခိုကျစနေိုငျသလား?
Metformin ဆိုတဲ့ဆေးဟာ ဆီးခြိုရောဂါကုသရာမှာအသုံးမြားဆုံးဆေးဖွဈပွီး လူနာမြားပါရငျးနှီးနတေဲ့ဆေးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ဆီးခြိုထိနျးရာမှာ အသုံးဝငျလှတဲ့ metformin ဟာ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတဈခြို့လညျး ရှိနပေါတယျ။အစာမကွတော လပှေတာ ကွှကျသားနာကငျြတာလိုမြိုးတှဖွေဈတတျသလို ကြောကျကပျရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျတယျလို့ဆိုကွပါတယျ။
Metformin ဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှာရှိတဲ့ Lactic acid ပမာဏကိုမွငျ့မားစပေါတယျ။ Lactic acid တှစေုပုံလာခွငျးဟာ ကြောကျကပျရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ပကျြစီးစတေယျလို့ဆိုကွပါတယျ။
ကြောကျကပျရဲ့ မူလလုပျငနျးဆောငျတာမကောငျးသူတှေ အသကျကွီးသူတှေ နဲ့ ဝမျးလြှောဝမျးပကျြနဲ့အနျတာလို ရဓောတျဆုံးရှုံးတဲ့အခွအေနမြေိူးတှမှော ကြောကျကပျထိခိုကျမှုပိုဆိုးနိုငျပါတယျ။
ဒါဆို Metformin သောကျသုံးမှုကို ရပျပဈရမှာလား?
Metformin ဟာ ဆီးခြို ထိနျးတဲ့နရောမှာ ရှပွေ့ေးနဆေဲဆေးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ကြောကျကပျပကျြစီးမှုမရှိသေးတဲ့ ဆီးခြို ဝဒေနာရှငျတှမှော metformin ဟာ နာတာရှညျကြောကျကပျပကျြစီးမှုကို နှောငျ့နှေးစတေယျလို့လညျး ဆိုကွပါတယျ။Metformin ကိုမိမိသဘောနဲ့ ရပျပဈတာထကျ တတျကြှမျးနားလညျသူဆရာဝနျနဲ့ ပွသတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။Metformin သောကျနရေတဲ့လူနာတှဟော ကြောကျကပျလုပျငနျးဆောငျတာစဈဆေးမှုကို ခွောကျလ သို့မဟုတျ တဈနှဈတဈကွိမျပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။မိမိသဘောနဲ့မိမိ ဆေးကိုသောကျသုံးခွငျး(ဥပမာ ဆရာဝနျရဲ့ညှနျကွားခကျြမပါဘဲ ဆေးဆိုငျမှဝယျသောကျခွငျး)နဲ့ ပမာဏတိုးသောကျခွငျးတို့ကို မပွုလုပျသငျ့ပါဘူး။တနျဆေး လှနျဘေးဆိုတာကို သတိပွု ရမှာဖွဈပါတယျ။
ဆီးချိုသမားတွေရဲ့လက်စွဲ metformin ဟာကျောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သလား?
Metformin ဆိုတဲ့ဆေးဟာ ဆီးချိုရောဂါကုသရာမှာအသုံးများဆုံးဆေးဖြစ်ပြီး လူနာများပါရင်းနှီးနေတဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆီးချိုထိန်းရာမှာ အသုံးဝင်လှတဲ့ metformin ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့လည်း ရှိနေပါတယ်။အစာမကြေတာ လေပွတာ ကြွက်သားနာကျင်တာလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်သလို ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
Metformin ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Lactic acid ပမာဏကုိုမြင့်မားစေပါတယ်။ Lactic acid တွေစုပုံလာခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ရဲ့ မူလလုပ်ငန်းဆောင်တာမကောင်းသူတွေ အသက်ကြီးသူတွေ နဲ့ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်နဲ့အန်တာလို ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေမျိူးတွေမှာ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို Metformin သောက်သုံးမှုကို ရပ်ပစ်ရမှာလား?
Metformin ဟာ ဆီးချို ထိန်းတဲ့နေရာမှာ ရှေ့ပြေးနေဆဲဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုမရှိသေးတဲ့ ဆီးချို ဝေဒနာရှင်တွေမှာ metformin ဟာ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုကို နှောင့်နှေးစေတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။Metformin ကိုမိမိသဘောနဲ့ ရပ်ပစ်တာထက် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။Metformin သောက်နေရတဲ့လူနာတွေဟာ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာစစ်ဆေးမှုကို ခြောက်လ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။မိမိသဘောနဲ့မိမိ ဆေးကိုသောက်သုံးခြင်း(ဥပမာ ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ဆေးဆိုင်မှဝယ်သောက်ခြင်း)နဲ့ ပမာဏတိုးသောက်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတာကို သတိပြု ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Breast Abscess in Lactating mothers and should continue breastfeeding or not